1 Beresosɛm 15 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Beresosɛm 15:1-29
15 Na osisii adan+ pii fae wɔ Dawid Kurow mu; afei nso osiesiee baabi+ maa nokware Nyankopɔn adaka no, na osii ntamadan maa no. 2 Saa bere no, Dawid kae sɛ: “Obiara ntumi nsoa nokware Nyankopɔn adaka no gye Lewifo no nko, efisɛ wɔn na Yehowa apaw wɔn sɛ wɔnsoa Yehowa adaka+ no na wɔnsom+ no daa.” 3 Ɛnna Dawid boaboaa Israel nyinaa ano wɔ Yerusalem+ sɛ wɔnkɔfa Yehowa adaka+ no mmra faako a wasiesie ama no no. 4 Ɛno nti Dawid boaboaa Aaron asefo+ ne Lewifo no ano; 5 Kohat asefo mu, otitiriw Uriel+ ne ne nuanom, ɔha aduonu; 6 Merari+ asefo mu, otitiriw Asaia+ ne ne nuanom, ahanu aduonu; 7 Gersom+ asefo mu, otitiriw Yoel+ ne ne nuanom, ɔha aduasa; 8 Elisafan+ asefo mu, otitiriw Semaia+ ne ne nuanom, ahanu; 9 Hebron asefo mu, otitiriw Eliel ne ne nuanom, aduɔwɔtwe; 10 Usiel+ asefo mu, otitiriw Aminadab ne ne nuanom, ɔha ne dumien. 11 Afei nso, Dawid frɛɛ ɔsɔfo Sadok+ ne ɔsɔfo Abiatar,+ ne Lewifo Uriel,+ Asaia,+ Yoel,+ Semaia,+ Eliel+ ne Aminadab, 12 na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mone Lewifo agyanom abusuafie mpanyimfo.+ Munnwira+ mo ho, mo ne mo nuanom, na monkɔfa Yehowa, Israel Nyankopɔn adaka no mmra faako a masiesie ama no no. 13 Moanyɛ saa kan+ no nti na Yehowa yɛn Nyankopɔn bu baa yɛn so no;+ yɛanhwehwɛ no sɛnea akwankyerɛ no te.”+ 14 Enti asɔfo ne Lewifo no dwiraa+ wɔn ho sɛ wɔrekɔfa Yehowa, Israel Nyankopɔn adaka no aba. 15 Ɛnna Lewifo no soaa+ nokware Nyankopɔn adaka no, sɛnea Mose nam Yehowa asɛm so hyɛe no; wɔde ɛho nnua no totoo wɔn mmati so.+ 16 Na Dawid ka kyerɛɛ Lewifo atitiriw no sɛ wɔmma wɔn nuanom nnwontofo+ no mfa wɔn nnwonto nneɛma+ mmegyinagyina wɔn gyinabea na wɔmfa nto dwom den mma anigye mmra, asanku ahorow+ nyinaa bi, ne nnawuta.+ 17 Ɛnna Lewifo no maa eyinom nyinaa gyinagyinaa wɔn gyinabea: Yoel ba Heman+ ne ne nuanom mu, Berekia ba Asaf;+ wɔn nuanom Merari asefo mu, Kusaia ba Etan;+ 18 wɔne wɔn nuanom a wɔwɔ kuw a ɛto so abien+ no mu, Sakaria,+ Ben, Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifelehu, Mikneia, Obed-Edom,+ ne Yeiel; wɔyɛ apon ano ahwɛfo; 19 nnwontofo no ne Heman,+ Asaf+ ne Etan; wɔn na wɔde wɔn gyinagyinae sɛ wɔmmɔ kɔbere nnawuta den;+ 20 ne Sakaria, Asiel,+ Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseia, ne Benaia; wɔn na wokurakura asanku a wɔto wɔ Alamot*+ so, 21 ne Matitia,+ Elifelehu, Mikneia, Obed-Edom, Yeiel, ne Asasia; wɔn na wokurakura asanku+ a wɔto wɔ Seminit*+ so a wɔyɛ dwonkyerɛfo; 22 ne Kenania+ a ɔda Lewifo a wɔsoa nneɛma no ano; ɔno na ɔkyerɛ wɔn sɛnea wɔnsoa no, efisɛ na waben wom;+ 23 ne Berekia ne Elkana, Adaka no so ahwɛfo;+ 24 ne Sebania, Yosafat, Netanel, Amasai, Sakaria, Benaia, ne Elieser, asɔfo a wɔhyɛn ntorobɛnto+ nokware Nyankopɔn adaka no anim, ne Obed-Edom ne Yehia, Adaka no so ahwɛfo. 25 Dawid+ ne Israel mpanyimfo+ ne apem apem so ahwɛfo+ no ka ho na wɔkɔfaa Yehowa apam adaka no fii Obed-Edom fie+ ahurusi mu.+ 26 Na ɛbae sɛ bere a nokware Nyankopɔn boaa+ Lewifo no ma wɔsoaa Yehowa apam adaka no, wɔde anantwinini nkumaa ason ne adwennini ason bɔɔ afɔre.+ 27 Saa bere no, na Dawid hyɛ nwera pa atade nsasin, ɔno ne Lewifo a wɔsõ Adaka no nyinaa ne nnwontofo no ne Kenania,+ ɔpanyin a odi anim ma nnwontofo+ soa adaka no; ná Dawid hyɛ nwera asɔfotade+ nso. 28 Na Israelfo nyinaa siim sɛ wɔde Yehowa apam adaka no reba; wɔbɔɔ ose,+ na wɔhyɛn mmɛn+ ne ntorobɛnto,+ bɔɔ nnawuta+ ne asanku ahorow+ nyinaa bi denneennen. 29 Bere a wɔde Yehowa apam adaka+ no duu Dawid Kurow mu no, Saul babea Mikal+ hwɛɛ mfɛnsere mu, na ohui sɛ Dawid rehuruhuruw saw,+ na obuu ɔhene animtiaa+ ne komam.
^ Alamot yɛ Hebri nnwom mu asɛm bi a wonnim nea ɛkyerɛ pɔtee.
^ Seminit yɛ Hebri nnwom mu asɛm bi a ebetumi akyerɛ ɛnne a wɔde bɔ dwom.
1 Beresosɛm 15